Kuzoqiniswa ezoku¡phepha emigwaqweni ngePhasika
ITEKISI ebilayishe abagibeli ngenkathi lihlolwa amaphoyisa omgwaqo kwisivimbamgwaqo ebesiseMariannhill Toll Plaza, izolo ekuseni Isithombe: NQOBILE MBONAMBI/African News Agency
Simphiwe Ngubane | April 1, 2021
UQALWE ngegiya eliphezulu umkhankaso i-Operation Val, kuqiniswa ezokuphepha ngamaholidi ePhasika emigwaqweni yaKwaZulu-Natal. Kuhlawuliswe abashayeli abaphula imithetho yemigwaqo, kwamiswa izimoto ezingakulungele ukuba semgwaqweni, kwahlolwa nokuthi iyalandelwa imigomo elwa neCovid-19.
UNdunankulu uMnuz Sihle Zikalala, uNgqongqoshe wezokuThutha, ukuPhepha nokuXhumana koMphakathi, uNkk Peggy Nkonyeni nezinhlaka zamaphoyisa babe nenyakanyaka yesivimbamgwaqo eMariannhill Toll Plaza, eThekwini izolo ekuseni.
UBEZIBAMBELE mathupha isivimbamgwaqo uNdunankulu waKwaZulu-Natal uMnuz Sihle Zikalala, ehambisana noNgqngqoshe wezokuThutha uNkk Peggy Nkonyeni izolo ekuseni Isithombe: Nqobile Mbonambi/African News Agency
Kumiswe lonke uhlobo lwesithuthi kusukela emalolini kuya ezithuthuthwini. Bekuhlolwa umshayeli nemoto ukuthi bakulungele yini ukuba semgwaqweni.
Kumiswe izimoto eziwu-1 279, kanti bangu-30 abashayeli abakhokhiswe inhlawulo zikhona nezimoto ezikhishwe emgwaqweni. Bekuhlolwa nesisindo sezimoto ezithutha umphakathi nezithwala impahla zifakwa emshinini okhipha imininingwane yemoto ngokushesha, uhlawuliswe uma kukhona okungalungile.
Abaholi badlulele edolobheni eThekwini, erenki yamatekisi ahamba amabanga amade aya e-Eastern Cape, beyohlola amatekisi ukuthi asesimeni sokuba semgwaqweni futhi alayishe isibalo sabagibeli esivumelekile.
Abagibeli nabashayeli bakhuthazwe ukuthi bafake izifonyo, bafuthe izandla ngesibulalimagciwane bahlale ngokuqhelelana bavule namawindi ezimotweni.
UZikalalala uxwayise oskhwiliphambana nobhoko emigwaqweni nasemiphakathini, wathi bazolala bebaliwe. Uthe amaphoyisa azobe echithiwe nasemiphakathini kuso sonke isifundazwe, umthetho uqinile kuliwa nokusabalala kwegciwane iCovid-19.
Utheinhloso yomkhankaso ukunciphisa isibalo sezingozi ezidlula nemiphefumulo yabantu.
“Abantu abayeke ukushayela bephuzile, bangalokothi bakhulume nocingo beshayela futhi abalandele imigomo ebekiwe yomgwaqo. Umshayeli akaphumule ngemva kwamahora amabili. Uma usuphuzile ungalokothi usondele emgwaqweni,” kuxwayisa uZikalala.
Uthe uhulumeni wakhe uzoyibhekisisa indaba yokulayishwa kwezindimbane zemithwalo ematekisini asuke elayishe abagibeli abanye abagoloza ukuthenga isihlalo sokubeka imithwalo. UZikala usamukele isinqumo sokuvalwa kokudayiswa kotshwala uma uzobuthenga uhambe nabo, kusukela ngoLwesihlanu kuze kube uMsombuluko.
UNkk Nkonyeni, obewudlubhe uphelele umfaniswano wamaphoyisa omgwaqo uShanela, unxenxe abashayeli nabahamba ngezinyawo ukuthi bahloniphe imithetho yomgwaqo. Uthe abashayeli abangalokothi bashayele ngesivinini.
Bayisithupha abantu abashona ezingozini zomgwaqo KwaZulu-Natal ngamaholidi ePhasika ngo-2020, ngemva kokuthi elakuleli lisanda kufakwa kuthaqa. Bawu-28 abantu ababhubha ezingozini zomgwaqo eNingizimu Afrika.